China 310s inopisa akakungurusa Stainless simbi ndiro kugadzira uye fekitari | Huaxiao
310 simbi isina chinhu ine kabhoni yakaenzana ine 0.25%, nepo 310S simbi isina chinhu ine kabhoni yakadzika ye0.08%, uye zvimwe zvikamu zvemakemikari zvakafanana. Naizvozvo, kusimba uye kuomarara kwe310 simbi isina simbi zvakakwirira uye kurwisa kwehurosi kwakanyanya. Iyo corrosion kuramba kwe 310S simbi isina waya iri nani uye simba racho rakadzikira zvishoma. 310S simbi isina waya isina kunetseka kunhuwa nekuda kwayo yakaderera kabhoni zvemukati, saka mutengo wacho wakakwira zvakanyanya.
Sino Stainless Simbi Kugona nezve 310s Hot akakungurusa Stainless simbi ndiro, 310s HRP, PMP
Upamhi: 600mm - 3300mm, izvo zvakadzvinyirirwa zvigadzirwa pls tarisa mune zvipenga zvigadzirwa
Nhovo uremu: 1.0MT - 10MT
310 / 310s Chikamu chimwe chete kubva pane zvakasiyana standard
1.4841 S31000 SUS310S 1.4845 S31008 S31008S 06Cr25Ni20 0Cr25Ni20 yakanyanya kupisa tembiricha
S31008 Chemical chikamu ASTM A240:
C: ≤ 0.08, Si: -1.5 Mn: ≤ 2.0, Kr: 16.00～18.00, Ni: 10.0～14.00, S: .00.03, P: .00.045 Mo: 2.0-3.0, N≤0.1
S31008 michina chivakwa ASTM A240:
Misiyano yacho yakapfupikiswa seinotevera:
1. Iyo kemikari inogadzirwa ndeye 310. Iyo kabhoni yezvinhu iri 0.15% uye iyo 310S inodiwa i0.08%. Pamusoro pezvo, iye anodawo kuti chinhu cheMO chiite zvishoma kana kuenzana ne0.75%.
2. Kuomarara kwepamusoro maererano nesimba. 310 yakakura kupfuura 310S
3. Iko kurwisa kurwisa 310S kwakakura kupfuura 310 nekuti 310S inowedzera MO
4. Iyo yepamusoro tembiricha kuramba 310S yemamiriro akafanana ekugadzirisa mamiriro ari nani pane 310
Zvimwe zvakatosiyana pakati pesimbi inopisa yakakungurutswa uye inotonhora
Nedudziro, simbi ingots kana mabhiri akaoma kuumbika pane yakajairwa tembiricha uye anonetsa kugadzirisa. Kazhinji, ivo vanodziya kusvika 1100 kusvika 1250 ° C yekuumburuka. Iyi nzira yekuumburuka inonzi inopisa rolling. Mazhinji simbi anomonera nekupisa kunopisa. Nekudaro, nekuti pamusoro pesimbi iyi inowanzo simbi oxide pachiyero chepamusoro, pamusoro pesimbi inopisa-yakakungurutswa ine hukasha uye saizi inochinja zvakanyanya. Naizvozvo, simbi ine yakatsetseka pamusoro, saizi chaiyo uye yakanaka michina zvivakwa inodiwa, uye inopisa-yakakungurutswa semi-apedza zvigadzirwa kana zvigadzirwa zvakapedzwa zvinoshandiswa sezvinhu zvakagadzirwa uye zvinotonhora. Rolling nzira kugadzirwa.
Kutenderera pane tembiricha yakajairika inowanzo kunzwisiswa kutonhora kutonhora. Kubva pakuona kwesimbi, iyo miganho yekuumburuka kwechando uye kupisa kupisa kunofanirwa kusiyaniswa nekudzokororazve tembiricha. Ndokunge, kutenderera kwakaderera pane iko kutsvaira kwekudzokorodza kutonhora kunotonhora, uye kutenderera kwakakwirira kupfuura tembiricha yekudzokororodza kupisa kupisa. Iyo simbi ine tembiricha yekudzokorodza pamusoro pe450 kusvika 600 ° C.
Kupisa kupisa, sekureva kwezita, kune tembiricha yakakwira yechimedu chakakungurutswa, saka kushomeka kwekushomeka kudiki uye kuwanda kwekushomeka kunogona kuwanikwa. Kutora kutenderera kwesimbi simbi semuenzaniso, ukobvu hwekuenderera uchirasa chisina chinhu unowanzoita nezve 230 mm, uye mushure mekuumburuka uye kupeta kuumburuka, iyo yekupedzisira ukobvu ndeye 1 kusvika 20 mm. Panguva imwecheteyo, nekuda kweiyo diki upamhi-kune-ukobvu reshiyo yesimbi ndiro, iyo yekutenderera chaiyo inodikanwa iri shoma, uye dambudziko rechimiro harisi nyore kuitika, uye convexity inonyanya kudzorwa. Kune izvo zvinodikanwa zvesangano, zvinowanzoitika kuburikidza nekudzora kutenderera uye kudzora kutonhora, ndiko kuti, kudzora iko kutenderera tembiricha, kupedzisa kutenderera tembiricha uye crimping tembiricha yekupedzisa kupeta kudzora iyo microstructure uye zvemagetsi zvivakwa zvechibhende.
Kutonhora kutonhora, kazhinji hapana nzira yekupisa isati yatenderera. Nekudaro, nekuda kwekukora kudiki kwemutsara, chimiro cheplate chinowanzoitika. Zvakare, mushure mekuumburuka kwechando, icho chigadzirwa chakapedzwa, uye nekudaro, kuti utonge iko kwehunyanzvi uye yepamusoro pehunhu, nzira dzakawanda dzakaomarara dzinoshandiswa. Iyo inotonhora inotenderera yekugadzira tambo ndeyakareba, iyo michina yakawanda, uye maitiro acho akaomarara. Sezvo zvinodiwa nemushandisi zvekuenzanirana, chimiro uye pamusoro pehunhu hwakavandudzwa, modhi yekudzora, L1 uye L2 masystem, uye nzira yekudzora chimiro cheiyo inotonhora chigayo inopisa. Zvakare, iyo tembiricha yemipumburu uye tambo ndeimwe yezvakanyanya kukosha zviratidzo zvekutonga.
Icho chinotonhora chakakungurudzwa chigadzirwa uye chinopisa chakakungurudzwa chigadzirwa pepa chakasiyana neyakaitika maitiro uye neinotevera maitiro. Icho chinopisa chakapetwa chigadzirwa ndicho chakasvibirira icho chinotonhora chakakunguridzirwa chigadzirwa, uye iyo inotonhora yakakungurutswa inopisa yakakungurutswa simbi coil inogadzirwa neiyo pickling maitiro Kutenderera zvigayo, kutenderera, zvinotonhora-zvakaumbwa, kunyanya kupeta mashizha-mafomu anopisa-akapetwa machira kuita matete-gaji anotonhorera-machira, kazhinji 0.3-0.7mm nekupisa-kuumburuka pa-bhodhi kutenderera kwe3.0mm. Cold inotenderera coil, musimboti mukuru kushandisa extrusion musimboti kumanikidza deformation
Pashure: 309 inopisa isina akakungurusa Stainless simbi yairema
Zvadaro: 316L 316 Hot akakungurusa Stainless simbi yairema